मानव जीवनको वास्तविकता - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भदौदेखि ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा
खतरातर्फ नदीको सतह, ३ दिन यी नदीमा उच्च बहाव
- उमेश प्रसाद अवस्थी(आदर्श)
भोली मज्जाले आराम गरौला भनेर मरिमरी काम गर्ने प्राणीलाई वर्तमानमा मानिस भन्ने गरिन्छ । तर उनीहरुले सोचेको दिन कहिल्यै आउदैन । बरु त्यो दिन आउनु भन्दा अगावै मृत्युले उनीहरुलाई अंगाल्न आइपुग्छ । जीन्दगीकाे आधा उमेरसम्म मान्छेहरु स्वास्थ्य बिग्रने गरि काम गर्ने गर्छन । आधा जीन्दगी त्यही काम गर्दा गर्दै बिग्रिएको स्वास्थ्यको उपचार गराउँदा गराउँदै समय बित्छ । जीवनमा पैसा भन्दाभन्दै पैसाको पछाडी लाग्ने गर्छ । तर अन्तिममा नाङ्गो भएर जाने कुराकाे ज्ञात हुँदैन । परिवार आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्ने गर्नुहाेस किनकी जुन दिन तपाई बिरामी पर्नुहुन्छ। तपाइले कमाएको पैसाले तपाईकै बिग्रिएको स्वास्थ्य उपचार गर्नमै सकिनेछ ।
दश हजारको मोबाईल तपाई कहिल्यै पानिमा भिजानुहुन्न । दुईलाखको बाईकमा तपाइले कहिल्यै मट्टितेल राख्नु्हुन्न । किनकी तपाई लाई डर हुन्छ, मट्टितेलले बाइकको ईन्जिनलाई खराब गर्न सक्छ । पानीले भिझ्दा मोबाईल बिग्रन सक्छ । जाबो दश हजारको मोबाईल र दुई लाखको बाईकको त्यत्रो चिन्ता छ तपाईलाइ ! तर तपाईले आजसम्म कहिल्यै चुरोट, रक्सी, गुट्खा, खैनि,मुखमा हाल्नु भन्दा पहिला सोच्नस भयाे कि ? यदि मुटु कलेजो फोक्सो खराब भयो भने के हुन्छ ? तपाईको अमुल्य शरिरको पनि त्यति नै ख्याल गर्नुहाेस । जति तपाई आफ्नो मोबाइल , बाईक अथवा अन्य चिजवस्तुको ख्याल गर्नुहुन्छ । गाडी मोबाइल , बाईक अथवा अन्य चल अचलसम्पति त कमाउन सकिन्छ । निरोगी र स्वस्थ शरिर कहिल्यै दोस्रो व्यक्तिबाट किन्न सकिदैन। आज तपाइ दुईचार पैसा आउने लोभमा कमशल खालको खाने कुरा खानुहुन्छ ।
गुणस्तरहिन समान प्रयोग गर्नुहु्छ । कामदार वा खेताला राखेर गर्न सकिने काम पनि आफै सकि नसकी गर्न तयार हुनुहुन्छ। सधै हतार, सधै तनाब चाहे जतिसुकै हतार किन नहाेस तपाईले कुनै मान्छे आफ्नो चिहान भन्दा टाढा पुगेको देख्नु भएकाे छ ? एउटा कुरा सधै याद गर्नुहाेस तपाईको घरमा खाना बनाउनको लागि तपाईले कामदार राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईको घरमा लुगाधुन र भाँडा माझ्नको तपाईले कामदार राख्न सक्नुहुन्छ । तर जुन दिन तपाई बिरामी पर्दा के तपाईले अस्पतालमा बिरामी बनेर सुतिदिनको लागी कसै खेतालालाई राख्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईले तपाईको लागी दुखाई सहीदिने कामदार राख्न सक्नुहुन्छ ?के कसैलाई तपाइको सट्टामा चिहानमा जल्नको लागि पैसा तिरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ? अबश्य सक्नुहुन्न । जब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ तब तपाई एक्लैलाई नै पर्नेछ ।
दुखाई सहन, अस्पतालको बेडमा सुत्न र जुन दिन तपाईकाे अकालमै ज्यान जान सक्छ तपाईकाे सारथी काेही बन्नेछैन । मृत्यु शैयामा जल्नुको अर्थ धन पैसा कमाएर अकालमै हैन । स्वास्थ्य बिगारेर हैन । रमाईलो गर्नुहाेस मोजमस्ती गर्नुहाेस कमसेकम आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल त गर्नुहोस । मिठा मिठा खानेकुरा खाँदै गर्दा स्वास्थ्य लाई के कति फाइदा गर्छ एक पटक सोच्नुहोस । याे मानवीय चाेलालाई सार्थक बनाउन आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पटक पटक मरेर बाँच्न भन्दा स्वास्थ्यकाे ख्याल गर्याे भने दुखकष्ट हरण हुन सक्छ । म चाहन्छु मरी मरी बाँच्नु सार्थक जीवन हैन । हाँसी,खुसी र स्वस्थ रहेर बाँच्न सकिन्छ । सधै याद राख्नुहाेस जीन्दगीका दिमाग हल्लाईदिने सत्य कुरालाई जुन दिन तपाईको मृत्यु हुन्छ । तपाईको पैसा बैङ्कमा नै रहन्छ । तपाइले मरिमरि कमाएकाे चलअचल सम्पति यहि रहन्छ । एक मुठि श्वास हुँदा लाग्छ कि तपाई सँग खर्च गर्न प्रयाप्त धन छैन । तसर्थ जीवनमा धर्ति त एक दिन छाेड्नै पर्छ । धर्ती छाेड्न पूर्व राेगि बनेर हैन स्वस्थ बनेर जीवन जीउन सकिन्छ । “यो त मेरो जीन्दगीको सानो अध्ययन मात्रै हो । कसैको दैनिकी दिनचर्या या जिन्दगीसंग मिल्न गएमा संयोग मात्रै हुनेछ ।”